မိဘအပေါ် သိတက်ပါ ၊ ၀န်မပိပါစေနှင့် « ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်း
မိဘအပေါ် သိတက်ပါ ၊ ၀န်မပိပါစေနှင့်
အခုခေတ် လူငယ်တွေဟာ မိဘအပေါ် ပိုပြီးသိတက် လာကြပါတယ် ၊၊ ကျပ်တည်းလာတဲ. ခေတ်အခြေ အနေ ကို နားလည် လာကြ လို့ လား ၊၊ အသိဥာဏ် တွေ ပိုရှိလာကြလို.လား ၊၊ ရှာဖွေ ရုန်းကန် နေရတဲ. မိဘတွေကို ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ခဲ.လို.လား ၊၊ ဘာ့ကြောင့် မှန်းမသိ ပေမယ့် ဟိုအရင် လူ တွေထက် ဘ၀အသိ ပိုရှိ လာကြ တာတော့ ကျန်းသေး ပါသည် ၊၊
အရွယ်ရောက် လာတာနဲ. အလုပ်ဝင်ဖို. အဆင်သင်. ဖြစ်နေ ကြပြီး မိသားစုကို တဖက် တလမ်း က ကူညီနိုင်သမျှ ကူညီကြ ပါတယ် ၊၊ မှန်မလား မှားမလား တော. သေချာ မသိရပါဘူး ၊၊ စစ်တမ်း ကောက်မထားတဲ. အတွက် လည်း ကိန်းဂဏန်း အတိအကျ တော. မဖေါ်ပြနိုင် ပါဘူး ၊၊ သေချာတာကတော. အရင်ခေတ် နဲ. ယခုနောက်ပိုင်း ခေတ် လူငယ်များ၏ ရပ်တည် ရမှူပိုင်း တော. တော်တော် လေးကို ခြားနားသွား ခဲ.ရပါပြီ ၊၊
လေးစားစွာဖြင်. မိုးဝေ ( စက်မှူတက္ကသိုလ် )
January 29, 2011 - Posted by	kyaukpadaung | အညာမြေအလှစာပေကဏ္ဍ